Home Wararka Farmaajo oo la filaayo in uu magacaabo Taliyaha cusub ee Hay’adda NISA
Farmaajo oo la filaayo in uu magacaabo Taliyaha cusub ee Hay’adda NISA
Waxaa la filayaa in maanta la magacaaabo Taliyaha Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka ee NISA, xili ay jiraan warar kala duwan oo ku aaddan arrintaasi magacaabista ah. Waxaa lasoo hormariyay kulankii khamiislaha ahaa ee Golaha Wasiirada, iyadoo sida la sheegay xalay farriimo wargalin ah loo diray Golaha Wasiirada, kuwaasi oo lagu wargaliyay inuu maanta jiro kulan aan caadia ahayn.
Marnaba lama filaayo in Farmaajo uu magacaabayo qof baaritaan ku sameeyn doona dacwada Ikram Tahliil ama ka soo horjeesan doona danaha gaarka ah Farmaajo, arimaha doorashooyinka. Waxa jira warar la isla dhaxmaraayay oo sheegaya in Xasan Khalif, oo hada ah wasiiru dowlaha madaxtooyada loo magacaabi doono Madaxa NISA, laakiin Xasan Khalif oo aan la xiriirnay ayaa inoo sheegay inay jirin cid kala hadashay arintaan, isagana uusan diyaar u ahayn in uu qabto jagaadaas.
Wararka ayaa sheegay in kulanka maanta loo madalsan yahay ee Golaha Wasiirada in lagu soo Magacaabi doono Taliyaha Cusub ee Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka. Waxaa jira Shaqsiyaad dhowr ah kuwaasi oo la sheegay in ay macquul tahay in loo Magacaabo Xilka, waxaana ka mid ah mas’uuliyin hadda xilal ka haya Dowaldda iyo sidoo kale shaqsiyaad kale oo dhanka maamul Goboleedyada xilal ka haya,kuwaasi oo loo badaniyao in saacadaha soo aaddan mid kood loo magacabo xilka.
Dhawaan ayay hayd markii heshiis ay gaaren Madaxweyne Framaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble, kadib markii ay isku fahmeen sida la sheegay qaabka magacaabista taliyaha cusub, waxaana meesha laga saaray shaqsiyaadkii ay horay u kaal magacaabeen ee khilaafku ka dhashay.